Wasnhington oo ku boorisay madaxweyne Saalax aqbalida heshiiska awood wareejinta – SBC
Wasnhington oo ku boorisay madaxweyne Saalax aqbalida heshiiska awood wareejinta
Posted by editor on May 24, 2011 Comments
Washington:- Xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka haweeayda lagu magacaabo Hillary Clinton ayaa sheegtay in xukuumadda mareykanka ay ka xun tahay talaabadii madaxweyne Saalax uu ka qaatay heshiiskii ay dowladaha khaliijka ay ka dhex wadeen xukuumadda iyo mucaaradka Yemen kaasi oo la doonayey in lagu soo afjaro qalalaasaha ka taagan dalka Yemen.
Clinton ayaa intaas raacisay in xukuumadeeda ay ku boorinayso madaxweyne Saalax in uu si nabad ah ku wareejiyo awoodda.
Hadalka Clinton ayaa ku soo beegmaya xilli Xoghayaha guud ee golaha iskaashiga gacanka ninka lagu magacaabo C/ladhiif Zayyaani uu ka ambabaxay magaalada Sanca ee xarunta dalka Yemen kadib markii ay guul dareesatay waan waantii uu golaha iskaashiga gacanka uu ka dhex waday xukuumadda iyo mucaaradka Yemen.
Madaxweyne Cali C/della Saalax ayaa shuruudo hor leh ku xiray saxiixa heshiiska lagu soo afjarayo rabshadaha ka socda dalka Yemen , kaasi oo mar sii horeysay ay saxiixeen mucaaradka dalkaas.
Shuruudaha cusub ee uu Madaxweyne Saalax ku xiray saxiixa heshiiskan ayaa waxaa kamid ah in mucaaradku ay heshiiskan ku saxiixaan qasriga madaxtooyada.
Mar sii horeesay taageerayaasha madaxweyne Saalax ayaa ku weerararay ergada khalijiyiinta iyo wafdiga reer galbeedka safaaradda Imaaraatka carabta uu ku leeyahay magaalada Sanca , taasi oo ay u fasirteen siyaasiinta indha indhaysa siyaasadda dalka Yemen in xisbiga haya talada dalka Yemen uusan raali ka ahayn waan waanta uu golaha iskaashiga gacanka uu ku doonayo xalinta rabshadaha ka scoda Yemen.